Mareykanka oo baaraya in la dilay Abuu Mansuur al-Amriiki
Mareykanka oo baaraya in la dilay Abuu Mansuur al-Amriiki Bar-Kulan April 17, 2012 Markacadeey
Saraakiisha sir-doonka ee dalka Mareykanka ayaa ku guda jira baaritaan lagu xaqiijinayo warbixinnada sheegaya in Cumar Xamaami oo loo yaqaan Abuu Mansuur al-Amriiki oo ah nin haysta dhalashada dalka Mareykanka kana tirsan ururka al-Qaacidda ee Soomaaliya in dhowaan la dilay.
Warbixinno aan la xaqiijin oo laga soo xigtay saxaafadda gudaha ee Soomaaliya ayaa sheegaya in al-Amriiki qoorta laga jaray, kaddib markii amar ka yimid mid ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyada al-Shabaab ee dhowaan ku biirtay shabakadda al-Qaacidda.
Sarkaal ka tirsan sir-doonka dalka Mareykanka ayaa u sheegay Fox News TV in haddii ay run tahay in la dilay Abuu Mansuur al-Amriiki ay isbeddel ku keenayso carbiska kooxda al-Shabaab ee dhallinyarada Mareykanka iyo waddamada reer galbeedka, iyadoo la ogyahay in al-Amriiki uu door muhiim ah ka ciyaari jiray soo jiidashada dadka qurba joogta ah.
Sarkaalka ayaa intaas raaciyay in wararka sheegaya dilka Cumar Xamaami inay dhinac walba ka eegayaan, inkastoo uu tilmaamay in aysan weli u suurta gelin inay xaqiijiyaan warbixintaas.
Warbixinno laga soo xigtay warbaahinta Soomaalida ayaa sheegaysa in horjoogaha maleeshiyada al-Shabaab Axmed Godane uu amar ku bixiyay dilka Abuu Mansuur al-Amriiki, kaddib markii uu dhowaan sheegay in qaar ka mid ah horjoogayaasha al-Shabaab uu naftiisa uga baqayo.